Ukuthengwa kukadizili kanye no-oyela kaphethiloli - Inkampani iGugliandolo Messina
Ukuthengwa kukadizili kanye no-oyela kaphethiloli - Inkampani yaseGugliandolo
Le nkampani ihambisana nezimboni kanye namabhizinisi ajwayelekile
5.0 /5 amavoti (amavoti angama-9)
Thenga udizili kanye namafutha kaphethiloli a I-Messina: la Inkampani ye-Orazio Gugliandolo kuyinkomba yereferensi ye Sicilia futhi i Calabria emkhakheni we imikhiqizo kawoyela. Ikakhulu, izimakethe zenkampani uphethiloli Okweyezimoto, nge-il Ukushisa futhi ngenxa yeuqobo wamandla ngama-generator. Kukhona futhi nokuntulekaBTZ uwoyela kaphethiloli futhi iAmafutha kaphethiloli we-BTZ, la i-nafta futhi i amafutha okugcoba.
Ukuthengwa kukadizili kanye namafutha kaphethiloli e-Messina: I-Orazio Gugliandolo inikezela amandla eSicily naseCalabria
L'ukuthenga di udizili kanye namafutha kaphethiloli ibhizinisi eliphambili le Inkampani esekwe Messina Horace Gugliandolo. Iphuzu lesethenjwa eliyiqiniso lakho konke Insimu yaseSicilian neyaseCalabrian, inkampani inikeza ukuhweba kwezimfanelo ezahlukahlukene ze uphethiloli e imikhiqizo kawoyela ezihlangabezana nekhwalithi ephezulu namandla. THE amafutha uketshezi, yenzelwe izinqubo ze-exothermicempeleni yizinto ezintekenteke okufanele zelashwe. Kufanele njalo uphendukele kubasebenzi abathembekile nabanolwazi.
Ukuthengwa kukawoyela kaphethiloli, uwoyela kashizi kanye no-oyela wokuthambisa: inkampani edume kuyo yonke iStrait emkhakheni weHydrocarbons
Kwangempela wholesale i-del umkhakha wamandla, Inkampani yaseGugliandolo ibhekana nokuthengiswa kwezinhlobo eziningi ze uphethiloli e okoketshezi. Phakathi kwezinhlobo eziningi, ungaxhumana nenkampani ukuthola udizili wokuzikhiqizela amandla. Lokhu hlanganisa di ama-hydrocarbons kubaluleke kakhulu ukuqinisekisa insizakalo yokuqhubeka kweugesi ozenzele. Kusetshenziselwa ukondla i odala amasethi.
Idizili yezimoto neyokushisa: inkampani i-Orazio Gugliandolo inikezela ngemikhiqizo yamafutha ephephile
uwoyela, uphethiloli sokuthola ukukhishwa e okoketshezi: kuhlale kukuhle ukuthembela kuchwepheshe nakubathengisi abathembekile, ucabangele abaphakeme Flash yemikhiqizo okukhulunywa ngayo. Ngenxa yesipiliyoni esihle nokuhlolisisa, i- Inkampani ye-Orazio Gugliandolo, a Messina, ithole ngokuqhubeka kwesikhathi indima yephuzu lokuqala lokubhekisela kuindawo enobunzima ukumaketha kwe imikhiqizo kawoyela. Thewholesale futhi kuphatha amafutha BTZ zombili uketshezi futhi obukhulu e i-nafta.
Isitolo esithe xaxa sezinkampani ezinkulu: enkampanini uzothola udizili wezinyanga zasehlobo nezasebusika
Horace Gugliandolo okunikezwayo uphethiloli ukhetho oluhle kakhulu lwezinyanga zasehlobo futhi kungezelwa uphethiloli - I-20 yezinyanga zobusika. Insiza esebenza kahle ye isitoreji emalini okungeyakhe kuyo Messina yenza inkampani ibe yireferensi yezimboni ezidinga uku amafutha kaphethiloli ukuze umondle ukuqhuma kwempahla. Onjiniyela bokuqamba nezisebenzi ezikhethekile baqinisa amazinga ezobuchwepheshe nsuku zonke ekuthengiseni imikhiqizo yethu. Kusuka amafutha okushisa agli amafutha okugcoba, Thewholesale kusukela ngo-1958 inikeze kuphela izinsizakalo eziphezulu kakhulu.
Ikheli: I-Via Nuova Panoramica, 580 (iSalita Fosse)
I-POSTAL CODE: 98167
Ucingo: 090 314051
Umakhala ekhukhwini: 366 3682286
Inombolo ye-VAT: 01459270839